Ngathi | I-Ningbo Transtek yeeMoto zeMveliso Co, Ltd.
Ukugcina kunye noMbutho
Impahla kunye nokuGcina iCloset
Umda kunye noKhuseleko lweKona
Iibhotile zamanzi zeSilicone
Indawo yokuGcina yokuHamba
Isiciko seSippy Sippy
UKUDLULA:Ukuthanda ngamandla okuqhuba ukuze wenziwe umsebenzi, kwaye lixabiso lethu eliphambili. Bamba inkxalabo malunga nomsebenzi wethu kunye nomzi mveliso, usikhuthaza ukuba siphathe zonke iinkcukacha zomsebenzi ngesimo sengqondo esifanelekileyo, kwaye sonwabile ukwamkela yonke imiceli mngeni.
IMFIHLO:Ulwalamano lwethu lwexesha elide kunye nabathengi lusekwe kukuthembana nokuhloniphana. Ngelixa kufezekiswa ukungafihli kolwazi kunye nabathengi, sikwathatha ngokungathí sina ilungelo lomenzi wabucala, imfihlo.
Amandla ethu: Ukuqaqanjiswa ko “Bungcali” kusigcina sizinikele ekomelezeni izinto eziluncedo kwicandelo lethu, siphucula yonke imihla ukuze sibe liqonga lokuthenga elinye kwindawo yokuya kubantwana kunye nakwindawo yabantwana kubathengi bethu.
Umoya weQela:Sinamaqela amaninzi kuYilo, ukuvelisa, ulawulo lomgangatho kunye nentengiso. Zonke ziyasebenzisana kakhulu. Ngaphandle koko, sisebenza ngokusondeleyo nabathengi bethu, siphuhlisa kunye, senza inkqubela kunye.
Ukuvulwa:Isimo sethu sengqondo kukumamela, ukufunda nokuphucula. Gcina iingqondo zakho zivulekile kwintengiso nakubathengi.
Kumgangatho we-6, iCandelo C16, No.299 Guanghua Road, Ningbo, China
Baby Car Mirror usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows, INdebe yokuTyisa abantwana, Imoto engaphambili Mirror, Ifolda yokuhlambela yabantwana enamavili, Indawo yoKhuseleko lweBelt, Ukhuseleko lweSango lokuNqanda uMntwana,